Change Color na Garnet, site na Tanzania / enweghị ọgwụ / vidiyo
Change Color Garnet, si Tanzania
Tags Mgbanwe agba na agba
Ngwakọta nke spessartite na pyrope garnet. Ngwongwo a na-eweta mgbanwe agba site na brownish na ìhè ụtụtụ na pink pink na ìhè ọkụ. Mgbanwe mgbanwe nke agba bụ nnọọ ihe siri ike ma dị ịrịba ama, nke karịrị nke alexandrite dị oke ọnụ.
Mgbanwe agba na agba
Onye na-adịghị ahụkebe ma dị oké ọnụ ahịa nke ndị na-ahụ maka nkume ndị dị na nkume. A na-achọsi ike maka mgbanwe dị iche iche iji gbanwee agba na-adabere n'ụdị isi iyi nke a na-ele ya anya. Ikike ịgbanwe agba na-emehiekarị mgbe niile maka pleochroism, nke nwere ike igosipụta agba dị iche iche na-adabere n'ile anya, ebe ọ bụ na ihe atụ nke mgbanwe agba adịghị adabere na ikiri elekere. Ngwongwo na-agbanwe agba bụ ụdị ngwakọta nke spessartite na pyrope garnet na n'ọtụtụ ọnọdụ, nwekwara ike ịmetụta ihe dị iche iche ma ọ bụ almandine garnet.
Mgbanwe nke mgbanwe agba nwere ike ịbụ ihe dị ịrịba ama, nke na-akarịkarị nke alexandrite kasị mma. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọla kọpa ka a na-ele anya n'okpuru ìhè anyanwụ, ma mgbe a na-ele ya anya n'okpuru ọkụ ọkụ, ọ ga-apụta na pink na agba. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agbanwe mgbanwe agba. Iji nwee obi ụtọ maka ụdị mgbanwe nke agba agba, a ghaghị ịhụ ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche, gụnyere ìhè ụtụtụ, oge ehihie ehihie, ìhè ọkụ na ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Dị ka ọtụtụ nkume ndị dị na tannet, agbazigharị agba na-amaghị na a ga-emeso ma ọ bụ nwekwuo ya n'ụzọ ọ bụla.
Ụdị Chemical: [Mg3 + Mn3] AL2 (SIO4) - Osisi siline siline
Nkịtị Structure: Cubic - rhombic, tetrahedron
Ike: 7 ka 7.5
Mmetụta: 3.65 ka 4.20
Ịmekọrịta: Ọ dịghị
Ngosipụta: Transparent, translucent, opaque
zụta agba agba Change Garnet na ụlọ ahịa anyị